बेन्तो भनेको के हो? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > बेन्तो भनेको के हो? यो जापानमा किन लोकप्रिय छ ?
बेन्तो बक्स भनेको के हो? जापानिज नभएपनि बेन्तो शब्द जापान आएपछि लगभाग दिन दिनै सुनिन्छ। केहि समय पछि त बेन्तो नै प्राय को खान बन्छ। आज हजुरहरुलाई यहि बेन्तो बक्स को ’bout मा केहि जानकारी गराउनेछु। खास मा बेन्तो बक्स भनेको टिफिन (खाजा) बक्स हो। यो जापान मा धेरै लोकप्रिय हुन्छ। जापान आएर बेन्तो नाचाखेका मानिस प्राय कम नै हुन्छन। यहाँ बेन्तो बक्स हरेक आकार, मूल्य र स्वादका पाइन्छन।
कन्बिनी (कन्भिनिएन्स स्टोर) मा पाइने सुपथ मूल्यका बेन्तो होस् या डिपार्टमेन्ट स्टोर मा पाइने महँगो बेन्तो वा घरबाट बनाएर अफिस वा स्कुल लगिने बेन्तो होस्, जापानीज हरु बेन्तो एकदमै मन पराऊछन। आजकल त बेन्तो नै बेच्न्ने रेस्टुराण्ट हरु नि छन् जहाँ बेन्तो किनेर त्यहि खान वा आफु संगै लगेर खान मिल्छ। जापानीज हरु धेरै व्यस्त हुने भएकाले पनि बेन्तो मनपराउछन। त्यसैले बेन्तो जापान को संस्कृति पनि हो अनि आवस्यकता पनि।
बेन्तो को इतिहास
बेन्तो को चलन परापूर्वकाल देखि नै रही आएको देखिन्नछ। पहिलो बेन्तो सन् ११८५ देखि १३३३ तिर कामकुरा अबधि मा सुरु भएको इतिहास छ। त्यतिखेर बेन्तो बनाउनुको मुख्य कारण भातलाई स्टोर गरेर, पछि खान मिल्ने गरि राख्नु थियो। यसरि खान राख्दा काम गर्ने र बाहिर निस्की रहनु पर्ने मानिसहरुलाई धेरै सजिलो भएको देखियो। बेन्तो को शाब्दिक अर्थ नै “सजिलो” हो। हुन पनि यो सानो भाडो मा सजिलो संग धेरै परिकार हरु प्याक गरेर पछि खान लै छिटो र मिठो होस् भनेर राखेको हुन्छ।
बेन्तो को खाना तताई रहनु पर्ने झन्झट हुन्न। तर बेन्तो जति खान सजिलो छ बनाउन भने तेती सझिलो छैन। बनाउन समय पक्कै लाग्छ। तेसैले बेन्तो किनेर खाने मानिस हरु नै धेरै हुन्छन।
स्टोरमा किनिने बेन्तो
A post shared by コンビニ弁当 (@konbinibento) on Dec 14, 2018 at 11:19pm PST
कन्बिनी, डिपार्टमेन्ट स्टोर वा सुपर मार्केट होस् यी तिनै ठाउँ मा बेन्तो को छुट्टै सेक्सन नै हुन्छ। मूल्य को हिसाब मा भन्नु पर्दा कम्बिनी को बेन्तो सबै भन्दा सस्तो हुन्छ। त्यस पछि सुपरमार्केट अनि महँगो डिपार्टमेन्ट स्टोरका बेन्तो पर्छन। बेन्तो हरु फ्रेश हुन्छन। बिहान बनेका बेन्तो लगभग अगिल्लो रात मात्र बनेका हुन्छन। सजिलो र सुरक्षा को लागि स्टोर मा पाइने बेन्तो बक्स मा कहिले कुन समयमा बनेको र कुन समय सम्म खाई सक्नु पर्ने लेखेको हुन्छ।
त्यसै गरि माइक्रो वेभमा तताऊदा कति समयराख्नु पर्ने भनेर पनि लेखीएको हुन्छ। बेन्तो बक्समा भात, माछा, मासु, अण्डा, अचार, फलफुलहरु धेरै भेराइटी हुन्छन। यी प्रयोग गरिएका सामग्री फ्रेश हुने भएकाले जापान को बेन्तो स्वास्थ्यको लागि असर गर्ने खालको हुन्न। पश्चिमी देशका फ्राई फुड भन्दा स्वस्थ हुने बेन्तो पनि जापानिजहरु मोटो नहुनुको एउटा कारण हो।
क्याराबेन キャラ弁 (क्यारेक्टर बेन्तो)
मानिस ले मुख ले भन्दा अगाडी आखाले खान्छ भन्ने भनाइ जापानमा प्रचलित छ। क्याराबेन तेस्तै हेर्दा मनमोहक लाग्ने बेन्तो हो। यो बेन्तो स्कुल पढ्ने बालबालिका मा लोकप्रिय छ। यसमा बेन्तो बनाउनेले अनेकौ आकार र रंगिन खानाको प्रयोग गरेर बेन्तोलाई जीवित तुल्याउने काम गर्छन। मानौ त्यो बेन्तो नभएर एउटा कार्टून क्यारक्टर हो।
यो बेन्तो जति देख्दा राम्रो देखिन्छ बनाउन सबै भन्दा झन्झटिलो हुन्छ। जापानिज स्कुल मा कसले राम्रो क्याराबेन बनाएर ल्याउने भनेर बालबालिका को बीच होडबाजी नै चल्नेगरेको छ।
के गरि बनाउने त बेन्तो
A post shared by ★おぺこやんのお弁当★ (@opeko_bento) on Apr 3, 2019 at 6:34am PDT
हजुर पनि आफै आफ्नो बेन्तो बनाउन चाहनु हुन्छ भने तल दिइएका स्टेप अनुसार गर्नुहोस।
१. सुरुमा आफुलाई ठिक्क हुने भाडो किन्नुहोस। १०० येन शप देखि अरु स्टोर मा अनेक थरिका बक्स पाइन्छन।
२. खानाको मात्रा अनुमान गर्नु होस्। बेन्तोमा ४:३:२:१ को अनुपातमा खाना प्याक गरिन्छ। बेन्तोको १० भागको ४ भाग भात , ३ भाग साइड डीस, २ भाग सब्जी अनि १ भाग अचार हुन्छ। अचार को ठाउँ मा डेजर्ट पनि हुन सक्छ।
३. खानालाई मिलाएर बक्स मा प्याक गर्नुहोस, माथि बाट डिजाइन दिनुहोस। डिजाइन दिन नोरी (सिविड) को प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिजाइन को लागि तल को वेबसाइट हेर्न सक्नु हुनेछ।
यो लेख ले हजुरहरुलाई पक्कै पनि बेन्तो को ’boutमा राम्रो जानकारी दियो होला। आफुपनि घर मा बेन्तो बनाउनु होस्। जस्तो बने पनि स्वाद लिएर खानुमै सबै भन्दा ठूलो खुसी हुन्छ।